होस् गर्नुहोस् है ! युरोप अमेरिका पठाउने भन्दै द’लालको बि’गबिगी – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियहोस् गर्नुहोस् है ! युरोप अमेरिका पठाउने भन्दै द’लालको बि’गबिगी
७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार काठमाडौं। के तपाईं कामका लागि फेरि विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने होस् गर्नुहोस् है। युरोपका जर्मनी, माल्टा, पोर्चुगललगायतका देशहरु तथा अमेरिकासमेत सजिलै पठाइदिने भन्दै न’क्कली विज्ञापनहरु निकालेर ठ’ग्ने गि’रोहको फ’न्दामा पर्ने धेरैको बि’जोग भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकसमेतको प्रयोग गरी युरोप र दुबईका पनि ठूला कम्पनीबाट मा’ग आएको भन्दै कामदार आह्वान गरेर ठ’ग्ने गि’रोहले धेरै सर्वसाधारण नेपालीहरुको उ’ठिबास लगाएका छन्।
यस्तै न’क्कली डिमाण्ड देखाएर थुप्रै मानिसहरुलाई जर्मनी, पोल्याण्ड, क्रोएसियालगायत युरोपका देशहरुले नेपाली कामदार मागेको भन्दै पैसा उठाउने एउटा मेनपावर कम्पनीलाई सरकारले २४ घण्टे पत्र पठाएर हाजिर हुन आदेश दिएको छ। ललितपुरको हरिहरभवनमा कार्यालय रहेको मुनलाइट ओभरसिजले एउटै व्यक्तिबाट लाखौं अ’सुल गरी अ’लपत्र पारेको सूचनाका आधारमा सो कम्पनीकी मा’लिक पार्वती खड्कालाई बुधबार २४ घण्टे पत्र पठाइएको छ। श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको बैदेशिक रोजगार विभागले सो कम्पनीको कार्यालयमा बुधबार नै छा’पा मा’री कम्पनीका सबै कागजातहरु पनि सि’ल गरेको छ।
खड्काले का’नुनअनुसार २४ घण्टामा विदेश पठाउन भन्दै रकम उठाउनु र विदेश पठाउन नसक्नुको कारण पेश गर्नु पर्ने छ। उनी विहीबारसम्म विभागका हाजिर भएकी छैनन्। विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार, पी’डितहरुको उ’जुरीका आधारमा सो कम्पनीलाई बैदेशिक रोजगारीको कुनै पनि का’रोवार नगर्नू भनी आदेश दिइसकिएको छ। उनले भने, ‘ठ’गीबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।’ समाचारअनुसार, सो ओभसिजमा ३ सयवटा पासपोर्ट जम्मा गरेर राखेको पाइएको छ। बि सं २०७४ सालको एउटा डि’माण्डपत्र देखाएर २०७७ सालका लागि मनिसहरुसंग लाखौं लाख पैसा उठाइएको पाइएपछि सो कम्पनीमा छा’पा मा’रिएको थियो।